बालकको पिठ्यूमा तेस्रो हात, भगवान मानेर पूजा « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
बालकको पिठ्यूमा तेस्रो हात, भगवान मानेर पूजा
तनहुँ, २ कार्तिक । संसारमा विचित्रको घटनाहरु देखा परिरहेका हुन्छन्। मानिसहरुको दुई वटा हात मात्रै हुन्छ। तर तनहुँमा एउटा यस्तै घटना भएको छ। २ वर्षको बालक गौरबको पिठ्यूमा तेस्रो हात बनेको छ। पिठ्यूमा हात भएपछि आएपछि उनलाई सुत्न र भुईमा पल्टिलन निक्कै गाह्रो भएको छ।
यसलाई हटाउन चिकित्सकले सर्जरी गर्नु पर्ने बताए पनि धेरै गाह्रो रहेको बताएको छ। बालकलाई कुनै पनि कपडा फिट भइरहेको छैन। चिकित्सकका अनुसार बालकको जन्जात नै मेरुदण्डमा अर्को हात पलाएकोले सर्जरी गर्न निक्कै गाह्रो छ।
गौरवको स्पाइनल कडमा समस्या भएकाले यसका साथै यसको सर्जरी गर्न मुस्किल हुने बताए। यस्तै धेरै खर्च लाग्‍ने भएकाले पारिवारको आम्दानी निक्कै कम भएकाले उपचार गर्न नसक्‍ने बताएका छन्। साथै चिकित्सकले बालकलाई स्पाइना बिफिडा कंडिशन समेत हुने सक्‍ने बताएका छन्।
गौरबको आमाले उपचार खर्च जुटाउन नसक्‍ने भने पनि उनलाई हेर्नकै लागि धेरै मानिसहरु आउने गरेका छन्। भगवानको अर्को रुप भन्दै उनलाई पूजाअर्चना समेत गर्दै आएका छन्। के हो यो स्पाइना बिफिडा कंडिशन ? स्पाइना बिफिडा नाम यस्तो अवस्था करीब १५ सय बच्चा मध्ये करिब एक जनालाई हुने गर्दछ।
के हो यो स्पाइना बिफिडा कंडिशन ?
स्पाइना बिफिडा नाम यस्तो अवस्था करीब १५ सय बच्चा मध्ये करिब एक जनालाई हुने गर्दछ। तर यस्तो अवस्थामा छुट्टै हात वा खुट्टा आउनु निक्कै दुर्लभ मानिन्छ। महिला गर्भवती भएको पहिलो महिनामा जब भ्रूणको संरचना तयार हुन्छ, तब उक्त प्रकृयामा आउने खराबीले यस्तो बनाइदिन्छ। शरीरको विकास हुने क्रममा यसको रुपमा जहाँ जहाँ बिग्रेर आउँछ। त्यही त्यही ड्यामेज भएर भ्रूणमा पनि प्यारालाइज हुने सक्‍ने सम्भावना बढी हुन्छ।
सुन्तली भन्छिन, ‘म देश बनाउछु भन्दै भोट माग्न आउने नेता होइन, तपाई आउनुहोस देश बचाईदिनुहोस भन्नु पर्ने नेता भएपछि मात्र नेपाल बन्छ’ (हेर्नुहोस भिडियो)
सांसद दम्पती पुत्री मिस नेपाल भएपछि हेटौंडामा खुसीयाली